WorldCoin စျေး - အွန်လိုင်း WDC ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို WorldCoin (WDC)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ WorldCoin (WDC) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ WorldCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ WorldCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
WorldCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
WorldCoinWDC သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.013WorldCoinWDC သို့ ယူရိုEUR€0.0109WorldCoinWDC သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00987WorldCoinWDC သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0118WorldCoinWDC သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.116WorldCoinWDC သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0814WorldCoinWDC သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.288WorldCoinWDC သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0483WorldCoinWDC သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0172WorldCoinWDC သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0179WorldCoinWDC သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.29WorldCoinWDC သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.101WorldCoinWDC သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0694WorldCoinWDC သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.973WorldCoinWDC သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.2.19WorldCoinWDC သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0178WorldCoinWDC သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0194WorldCoinWDC သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.404WorldCoinWDC သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0902WorldCoinWDC သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥1.37WorldCoinWDC သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩15.37WorldCoinWDC သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦4.94WorldCoinWDC သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.953WorldCoinWDC သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.36
WorldCoinWDC သို့ BitcoinBTC0.000001 WorldCoinWDC သို့ EthereumETH0.00003 WorldCoinWDC သို့ LitecoinLTC0.000216 WorldCoinWDC သို့ DigitalCashDASH0.000127 WorldCoinWDC သို့ MoneroXMR0.000138 WorldCoinWDC သို့ NxtNXT0.916 WorldCoinWDC သို့ Ethereum ClassicETC0.00181 WorldCoinWDC သို့ DogecoinDOGE3.62 WorldCoinWDC သို့ ZCashZEC0.000131 WorldCoinWDC သို့ BitsharesBTS0.493 WorldCoinWDC သို့ DigiByteDGB0.473 WorldCoinWDC သို့ RippleXRP0.0419 WorldCoinWDC သို့ BitcoinDarkBTCD0.000434 WorldCoinWDC သို့ PeerCoinPPC0.0445 WorldCoinWDC သို့ CraigsCoinCRAIG5.74 WorldCoinWDC သို့ BitstakeXBS0.537 WorldCoinWDC သို့ PayCoinXPY0.22 WorldCoinWDC သို့ ProsperCoinPRC1.58 WorldCoinWDC သို့ YbCoinYBC0.000007 WorldCoinWDC သို့ DarkKushDANK4.04 WorldCoinWDC သို့ GiveCoinGIVE27.25 WorldCoinWDC သို့ KoboCoinKOBO2.83 WorldCoinWDC သို့ DarkTokenDT0.012 WorldCoinWDC သို့ CETUS CoinCETI36.33
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Thu, 06 Aug 2020 19:20:02 +0000.